Phenloxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူ
နေတိုး (နိုင်လွန်) သိုင်းကြိုးနာရီ
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Tools များ
8 နှစ်ကြာလက်ပတ်နာရီကိုကမ္ဘာကအာရုံစိုက်, အမြဲတမ်းပထမနေရာမှာအရည်အသွေးကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်တင်းကြပ်စွာထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု, ရိုးရှင်းသောနာရီ, chrono နာရီ, စက်မှုနာရီ, စသည်တို့အတွက်စိတ်ကြိုက် logo ကိုလက်ကောက်ဝတ်ယံထက်ပိုမို 2000 မော်ဒယ်များ ...
အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်ရဲ့နာရီစောင့်ရှောက်လော့။
Professional ကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။ အားလုံးသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က 24 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မည်
တရုတ်လက်ပတ်နာရီထုတ်လုပ်သူထုံးစံကြီးတွေမျက်နှာ CHRO ...
2018 ယောက်ျားဇိမ်ခံ 10atm ရေကိုခံနိုင်ရည်နီလာ ...
အမျိုးသားများအတွက်ဇိမ်ခံပွတ်ကိစ္စတွင်ဆွစ်ဇာလန် chronograph ပြောင်းရွှေ့ ...
2018 mens ကြီးတွေမျက်နှာသားရေတီးဝိုင်း chronograph sta ...
custom နာရီပြန် japa သံမဏိ chrono ...
လင်းကျောက်လက်ပတ်နာရီ chrono chronograph ပြောင်းရွှေ့ plating IP ကို ​​...
OEM လိုဂိုသားရေသိုင်းကြိုးသံမဏိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ...
Fancy ဇိမ်ခံ mens 2018 လူကြိုက်များသံမဏိ ...
Mens အရောင်သံမဏိကွက်သိုင်းကြိုးအလိုအလျောက်စက်ပြင် ...
ရှန်ကျန်းယောက်ျားအလိုအလျှောက်စက်မှု 316l ကိုချောင်းမြောင်း ...
OEM အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသံမဏိ domed ...
အမျိုးသားများအတွက် chronograph အော်တိုထုတ်လုပ်သူ2watch ...
လူကြိုက်များ mens အနက်ရောင်အနီရောင်-အနက်ရောင်နိုင်လွန်သိုင်းကြိုးရေငုပ် ...
အားကစားယောက်ျား NATO သိုင်းကြိုးဂျပန်လှုပ်ရှားမှုရေငုပ်သူစောင့်ကြည့် ...
ရေငုပ်ယောက်ျား 10atm ရေစိုခံ mens နိုင်လွန်ကိုချောင်းမြောင်း ...
oem Rolex ရေငုပ်သူအရည်အသွေးမြင့် mens ့ကိုချောင်းမြောင်း ...
အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Rolex ငုပ်ယောက်ျားကိုချောင်းမြောင်း ...
ထုံးစံဇိမ်ခံဖွဲနုလိမ္မော်ရောင် Rolex ငုပ်လက်ပတ်နာရီယောက်ျား ...
mens ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ကိုအလိုအလျောက်ကြည့်ရှု Rolex OEM ...
2018 ရေကိုခံနိုင်ရည်အားကစားထုံးစံလိုဂို s ကိုစောင့်ကြည့် ...
silicone သိုင်းကြိုးသံမဏိကျောရေ resis ...
အမျိုးသားများအတွက်ထုံးစံရေငုပ်သူ 10atm ရေကိုခံနိုင်ရည်ဆီလီကွန် ...
ရိုးရှင်းသောအားကစားစတိုင် 10atm ယောက်ျားစွန်ခံ st ...
PHENLOXY WATCH, CO ။ , LTD မှ 2009 ခုနှစ်တွင်ရှန်ကျန်းတရုတ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့ professional OEM လက်ပတ်နာရီစက်ရုံ, OEM ကိုချောင်းမြောင်းနှင့်အလွိုင်း OEM တည်ငြိမ်လင်းကျောက်များနှင့်စက်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ကိုချောင်းမြောင်းအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထုတ်လုပ်အာရုံစိုက်ပါ။ ကြောင့်ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချောမွေ့ဆက်သွယ်ရေးကောင်းသောအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်းများ, ကောင်းတဲ့အရည်အသွေး, မှ, ငါတို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, သြစတြေးလျ, ကနေဒါ, ဆွီဒင်, USA သို့နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ကျော်အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရပြီဖြစ်သောတရုတ်လက်ပတ်နာရီကိုပေးသွင်းဖြစ်လာ ကမ္ဘာကြီးကို။ 1200 စတုရန်းမီတာစက်ရုံအဆောက်အဦးအထက်တွင်ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်း, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, QC ဌာနများအနေဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားနာရီထိန်းချုပ်ထားသည်။
Excellent ကဝန်ဆောင်မှု, များစွာသောထုံးစံလက်ကောက်ဝတ်လက်ပတ်နာရီမော်ဒယ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း, တည်ငြိမ်အရည်အသွေး, လုံခြုံကုန်သွယ်ရေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးအချိန်မီဆက်သွယ်ရေး။ ကြှနျုပျတို့အမြဲလုပ်နေခဲ့ကြတူသောအားလုံးဖောက်သည်ဈေးကွက်ထဲမှာအရည်အသွေးကောင်းလက်ပတ်နာရီအမှတ်တံဆိပ်တည်ထောင်ရန်နှင့်ကြီးထွားကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အပေါ်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မင်းသမီးနာရီ, လင်းကျောက်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနာရီ, အားကစားသို့မဟုတ်ရေငုပ်နာရီနှင့်, လက်ပတ်နာရီကိုဒီဇိုင်းအားလုံး type ကိုသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ တစ်ဦးကပျော်ရွှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးအဆက်အသွယ်ကနေစတင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်နှင့်အတူတူနေတဲ့နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးကြပါစို့။
OEM ဇိမ်ခံရိုးရှင်းသော mens သံမဏိသိုင်းကြိုးပြုပါ ...
အကောင်းဆုံး mens ဖက်ရှင်ဂျပန် chronograph movt စောင့်ကြည့် ...
အမျိုးသားများအတွက်ထုံးစံလိုဂိုဖက်ရှင်ဇိမ်ခံအော်တို chrono ...
တရုတ်အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ oem သားရေသိုင်းကြိုး ...
စျေးပေါနီလာဖန်အလိုအလျောက်စုံတွဲလက်ကောက်ဝတ် Wat ...
ဇိမ်ခံလက်ပတ်နာရီကိုနီလာကျောက်သလင်းဖန် chronograph ...
"SUBSCRIBE" ကိုနှိပ်ပါ! ကိုသင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပေးပို့ပါ။
Adress:6ကြမ်းပြင်, Leishi စက်မှုဇုံ, No.1119 Guanlan Guanguang လမ်း, Longhua အသစ်ကခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်